Kooxo Hubaysan oo xalay waqooyiga Magaalada Gaalkacyo ku dilay Isku duwihii Wasaarada Amniga Puntland. | Salaan Media
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in Kooxo hubeysan xalay Xaafada Garsoor ee Waqooyiga Galkacyo ku dileen isku duwihii Wasaarada Amniga Puntland oo lagu magacaabi jiray Axmed Maxamed Dhagaweyne.
Ciidamada Puntland ayaa bilaabay howlgalo dad badan lagu qab qabtay, dilka isu duwahan ayaa la sheegay in rag bastoolado ku hubeysan ay dhowr rasaas kaga dhufteen qeybaha sare ee jirkiisa , iyagoo kooxihii dilka gaystay goobta ka baxsaday.
Mas’uul ka tirsan Maamulka Mudug ee Puntland ayaa sheegay inay baadigoobayaan kooxihii dilka mas’uulka ka dambeeyay, iyadoo saakay gebi ahaanba uu hakad ku jiro dhaq dhaqaaqii guud ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo.
Dhinaca kale Xaaafada Garsoor ayaa dhowr jeer oo horay waxaa lagu dilay dad kala duwan, iyadoo xaafadaasi ay tahay meel ay aad ugu badan yihiin falalka dilka ah.